अहो कस्तो बन्यो समाज : राजधानीमै बालकको अपहरणपछि हत्या अनि प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’ – AGNIJWALA-agnijwala
Home /अहो कस्तो बन्यो समाज : राजधानीमै बालकको अपहरणपछि हत्या अनि प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’
प्रमुख समाचारAugust 7, 2018
अहो कस्तो बन्यो समाज : राजधानीमै बालकको अपहरणपछि हत्या अनि प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’
सोमबार भएको एउटा घटनाले हाम्रो समाज कस्तो बन्दैछ भन्ने एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ। अपहरण-हत्या-प्रहरीको इन्काउन्टर : यो त्रिकोणमा तीन जनाको ज्यान मात्र गएन, थुप्रै प्रश्नहरु पनि जन्माएको छ। अपहरण गरी हत्या गरिएका बालकको उमेर ११ वर्षको मात्र रहेछ। अनि उसको अपहरण गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले इन्काउन्टर गरेका दुई जनामध्ये एकजनाको उमेर थियो २२ वर्ष र अर्कोको २३ वर्ष। सबै भर्खरका। कसरी यिनीहरु यति क्रुर अपराधी बन्न पुगे? कस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ हामी?
पीडित र पीडक दुवैको सामाजिक अवस्था हेर्दा पनि अचम्म बनाउने खालको छ।
निशान खड्का, जसको अपहरण र हत्या भयो- यिनकी आमा चमेली काठमाडौँको काँडाघारीमा सामान्य चियापसल चलाएर बस्थिन्। बाबु गणेश खड्का रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए।
तर बालकको अपहरण गरी फिरौती मागिएछ एक करोड। बार्गेनिङ हुँदै गर्दा ४० लाखमा अन्तिम माग राखिएछ।
फिरौतीको कुरा सुन्दा सुरुमै यो अलि अमिल्दो लाग्न सक्छ। ४० लाख भनेको ख्याल गर्ने कुरा हो? मलेसियामा कति वर्ष काम गर्नुपर्छ यति कमाउन? चियापसलबाट आएको नाफाले कति वर्ष लाग्छ यति कमाउन?
१. नाम : गोपाल तामाङ
ठेगाना: जिल्ला नुवाकोट सामरी
२. नाम: अजय तामाङ
उमेर: २३ वर्ष
ठेगाना: जिल्ला सिन्धुपाल्चोक कर्थली–१
मारिने दुई जना यिनै थिए। दुवै पेशागत अपराधी नभएर रङ लगाउने काम गर्दा रहेछन्। यीमध्ये एक गोपालको बालकका आमासँग पहिले नै चिनजान रहेको देखिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको भनिएको छ।
के अपहरण र हत्याको उद्देश्य पैसा असुल्नु नै थियो। पैसा असुल्ने नै नियत भएको भए सामान्य परिवारका बालकलाई किन अपहरण गरियो? कि अरु नै केही नियत पनि लुकेको छ यो घटना पछाडि?
त्यस्तै अर्को प्रश्न आउँछ- हत्या किन गरियो? यदि पैसा असुल्ने मात्र नियत भएको भए पैसा नै नआउने गरी हत्या किन? हत्या पनि सामान्य रुपमा हैन क्रुर ढंगले।
भक्तपुरको थिमि नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित श्याम लवटको बन्दै गरेको घरको पिलरमा गाडेको अवस्थामा शव फेला पार्‍यो प्रहरीले। हातखुट्टा बाँधेको र मुखमा कपडा कोचिएको अवस्थामा। के बच्चा चिच्यायो र अरुले थाहा पाउँछ भनेर मात्रै यसरी विभत्स ढंगले हत्या गरियो होला त?
यी विभिन्न प्रश्नको जवाफ अब प्रहरीको अनुसन्धानले मात्रै दिनेछ किनभने अभियुक्तहरु त मरिसके। साँचो कुरा उनीहरुले मात्र बताउन सक्थे।
राजधानीबाटै बच्चा अपहरण हुँदा प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेन। पत्ता लगाउँदासम्म बच्चाको हत्या गरेर गाडेर भाग्न भ्याइसकेका थिए अपराधीहरु। के यसैको फ्रस्टेसन निकाल्न इन्काउन्टर गरेका हुन् त प्रहरीले?
यसो हेर्दा लाग्छ- बच्चालाई विभत्स ढंगले मार्ने, साला ठीकै गर्‍यो इन्काउन्टर गरेर। हो जस्तो पनि लाग्छ।
तर यदि यसै हो भने त अदालत भन्ने चिजलाई पनि विघटन गरिदिए हुन्छ। किन चाहियो बेकारको यो लफडा। अनेक थरि कानुन पनि बनाउनु परेन। ज्यानको बदलामा ज्यान। यति भए पुग्यो।
प्रहरीको विज्ञप्ति हेर्ने हो प्रहरीले पनि भावनामा बगेर इन्काउन्टर गरिदिएको जस्तो देखिन्छ। अपराध महाशाखाको विज्ञप्तिको अंश यस्तो छ-
अपराधिक व्यक्तिहरु भक्तपुर जिल्लाको पाइलट बाबा जंगलतर्फ भागेको सुचना प्राप्त भई खटिएको टोली निजहरुको खोजतलास गर्न पाइलट बाबा जंगलतर्फ जाने क्रममा भक्तपुर जिल्लाको सुर्यविनायक न.पा. वडा नं. ८ पाईलट बाबाको आश्रम जाने जंगलमा पुग्दा अपरिचित अपराधिक व्यक्तिहरुको समूहले हतियार निकाली खटिएको टोलीलाई लक्षित गरी गोली प्रहार गर्न लागेको अवस्थामा मुडभेड हुँदा सर्चको लागि खटिएको प्रहरी टोलीले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि गोली प्रहार गर्दा उक्त अपराधिक समुहमा रहेका २ जना व्यक्तिलाई लाग्न गई निजहरुको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको । घटनास्थलमा पेस्तोल थान–१ र सो गाली २ राउण्ड फेला परेको ।
यी दुई अभियुक्तहरुले गोली चलाएका रहेनछन्, विज्ञप्तिका अनुसार ‘गोली प्रहार गर्न लागेको अवस्था’मात्र रहेछ। पेस्तोल एउटा मात्र बरामद भएको लेखिएकोले एक जनाको हातमा मात्र पेस्तोल भएको बुझिन्छ। अर्थात् प्रहरीले आत्मरक्षाकै लागि गोली चलाएको भए पनि पेस्तोल भएकोलाई मात्र गोली हानेर ढाल्न सक्थ्यो। पेस्तोल नभएकोलाई जिउँदै पक्रन सक्थ्यो। मर्ने गरेर गोली नहानी घाइते मात्र पार्न पनि सकिन्थ्यो।
अहिलेलाई ठीकै छ इन्काउन्टर गरेर राम्रै गर्‍यो भन्दै प्रहरीलाई यस्तो गैरकानुनी कामका लागि बढावा दिँदै जाने हो भने पछि सबै कुरामा यस्तै इन्काउन्टर हुने दिन आउन सक्छ। छिमेकी भारतकै केसहरुलाई उदाहरण हेर्ने हो भने पनि पछि रिसइबीमा आफै अपराधी घोषित गर्दै इन्काउन्टर गरिदिने शैली भित्रिन सक्छ। जुन पछि घातक हुन जानेछ।